Madaxweyne Farmaajo ‘‘Muuse Biixi Cabdi waa nin Soomaali ah oo waayo arag ah +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweyne Farmaajo ‘‘Muuse Biixi Cabdi waa nin Soomaali ah oo waayo arag...
Madaxweyne Farmaajo ‘‘Muuse Biixi Cabdi waa nin Soomaali ah oo waayo arag ah +(SAWIRRO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynaha JF Somaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ka qaybgalay xuska sanad guurada 60aad ee ka soo wareegtay maalintii Xorriyadda Gobolada Waqooyi ayaa u hambalyeeyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed.
Farmaajo oo khudbad ka jeediyay munaasabadda ayaa si qoto-dheer kaga hadlay muhiimadda maalinta 26-ka June oo xusuus weyn u leh shacabkeena, maadaama ay ahayd ileyskii koobaad ee halgankii xornimo doonka iyo maalintii koobaad oo calan Soomaaliyeed laga taago dhul Soomaaliyeed oo xora.
“Waxaa xusid mudan kaalintii Somaliland ay ku lahayd halgankii gobonimo doonka iyo xoreynta Gobolada Waqooyi, oo la mid ahaa doorkii SYL ku lahayd xornimada Gobolada Koofureed. Labada urur waxay lahaayeen xiriir wanaagsan, ujeedooyin iyo aragtiyo mideysan.” Ayuu yri Madaxweynaha.
Madaxweynaha JF Soomaaliya ayaa tilmaamay in wadahadaladii dhab u heshiisiinta ee ku dhisan qalbi furnaanta, is ogolaanshaha, walaaltinimada iyo daacadnimada ee ka furmay Jabuuti 14-kii bishan ay yihiin wadahadalo miro dhal ah.
“Walaaleheena Somaliland waxaan ka raadinaynaa midnimo. Geeska Afrika waxaa ka bilaabmay iskaashi dhaqaale oo Somaliya ay fikirkiisa bilowday.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.